Ukuphupha izitya Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Phupha malunga nezitya
Isimboli yamaphupha "amacwecwe" anzima kakhulu. Ke ngoko, ukutolikwa kwephupha, kubalulekile ukuba unike ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha zephupha. Khawuzibuze ukuba bekutheni ukutya kwiipleyiti. Yayiyintoni ukumila kwamacwecwe: arawndi, isikwere, okanye okweqanda? Zenziwe ngantoni izitya? Ngaba kwakulula okanye kunzima? Ngaba ubonile i-napkin ukongeza kwiipleyiti? Yonke le mibuzo kufuneka ikuncede utolike iphupha lakho.
1 Uphawu lwephupha «izitya» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «izitya» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «izitya» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «izitya» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko lwamaphupha ngokubanzi, kwenziwa umahluko phakathi kwezitya zokutya ezinje ngeekomityi, iijagi kunye neepleyiti kunye neepleyiti zezilwanyana ngokunxulumene nophawu 'lweepleyiti'.
Ihashe lesilwanyana ephupheni lisetyenziswa njengomqondiso ku Ishishini eliyimpumelelo itolikwe xa iphupha lingumsebenzi ngokulingeneyo el mundo yomlindo. Nangona kunjalo, uninzi lwezixhobo zokutya okanye zokupheka zibonwa phantsi komqondiso wephupha "izitya."
Ngokubanzi, i-tableware njengophawu lwephupha ifanekisela ubudlelwane bephupha kunye nalo indawo. Isalathiso sokuziphatha okungalunganga okanye okungalunganga kwilizwe lokuvuka kuhlala kufakiwe. Izixhobo zasekhitshini ephupheni zitolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengophawu lwe Ukuhleba.
Ukuba iphupha libona izitya ezingafakwanga ephupheni, umzekelo isitya, iipleyiti okanye iikomityi, oku kunokwenziwa nguye. Ukulwa khomba kusapho. Mhlawumbi oku akukabonakali. Kodwa kuya kufuneka uyilungele. Ukubona i-bachelor iphupha inani elikhulu lezitya ephupheni, oku kuthembisa umtshato osondeleyo ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha.
Ukuthenga izitya ezintsha ephupheni kubonisa ukongeza kusapho. Umbono wezitya ezimdaka njengeempawu zephupha zibonisa iinkxalabo zekhaya emhlabeni ukusuka ekuvukeni ukulala. Ukuhlamba izitya ephupheni kubonisa ukoneliseka kwi uthando nabahlobo. Ukuba iphupha elo liphula izitya ngabom ephupheni, kuya kufuneka ulungelelanise nobunzima kunye nokuxabana kusapho kwihlabathi elivukayo.
Ukuba ukuphupha kuqhekeza izitya ephupheni, oku kuyathembisa oku kwihlabathi elivukayo. Suerte y mpu melelo. Ukuba iphupha eli lijonga indlela ezityiwa ngayo izitya ephupheni, izinto ezingathandekiyo zinokwaziswa kwihlabathi elivukayo. Ukubona kwezitya ezaphukileyo njengophawu lwephupha kubonisa ukulahleka kobuhlobo.
Ukuba iphupha linezitya ezenziwe ngentsimbi ephupheni, oku kuyintsingiselo yezimo ezilungileyo zokuhlala ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha. Itafile yegolide okanye iipleyiti zeenqwelo ephupheni zitolikwa njengobutyebi.
Uphawu lwephupha «izitya» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwimbono yengqondo, ukuhlamba izitya ephupheni kubonisa ngokuphupha ukuba uku imeko engakhuselekanga ibekwe kwilizwe lokuvuka. Kule nto akanayo yonke into phantsi kolawulo kwaye ezinye izinto zisongela ukuphuma esandleni sakhe. Ukuthenga izitya ezintsha ephupheni kutolika ukutolikwa kwengqondo kwephupha njengotshintsho olonwabisayo kusapho.
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, iinxalenye ezithile zezitya ephupheni zibaluleke kakhulu. Banikezela ngolwazi olongezelelweyo:
Iglasi njengenxalenye yezitya ephupheni ibonisa ngokungafihlisi ukuba iphupha lelakho. Yityhila imeko yakho yeemvakalelo Kuya kufuneka okanye kufuneka ubonakalise ngokucacileyo iimvakalelo zakho kwabanye abantu. Ngamanye amaxesha oku kutolikwa kunokujikwa kuchasane; Yayiliphupha ukuza kuthi ga ngoku ngokweemvakalelo kakhulu, kufuneka azigcine kuye iimvakalelo zakhe kwixa elizayo
ijagi ibizwa ngokuba Uphawu lokuziva iqondwe, oko kukuthi, kufanele ukuba icace ephupheni ukuba kufuneka ibone iminqweno yayo yokomoya kwaye iyiphumeze kwihlabathi elivukayo.
isitya njenge-tableware ephupheni iba luphawu ngenxa yobume bayo oburhangqi ubufazi itolikwe, inokubonisa ukwamkeleka kwephupha
Ngokwesiqhelo into eshushu iselwa kwindebe, ke ngoko ukutolikwa kwengqondo ephupheni kuyitolika indebe ephupheni njengophawu lwe Umdla okanye iimvakalelo ezifudumeleyo
ukuba umphuphi ubona izitya ezininzi kunye nezitya zakhe ephupheni, kuya kufuneka ajonge ngakumbi kwiintsalela zazo ukutolika; Izinto ezivela kuyo ipleyiti kunye nokuhonjiswa kwayo kubalulekile.
Uphawu lwephupha «izitya» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, i-tableware njengophawu lwephupha ibuza umphuphi ukuba uza kwenza ntoni kwixesha elizayo. ukukhanya kokomoya ifuna ukwandisa.